यो तरिका अपनाउनुभयो भने जागिरमा छिट्टै प्रमोसन हुन्छ - Internet Khabar
यो तरिका अपनाउनुभयो भने जागिरमा छिट्टै प्रमोसन हुन्छ
November 3, 2017 January 1, 2019 Internet Khabar
काठमाडौं । अफिसमा मेहनत चाहिँ असाध्यै गर्ने तर प्रमोसन हुने बेलामा चाहिँ चुक्ने मानिस धेरै भेटिन्छन्। प्रमोसन पाउनका लागि मेहनतले मात्र पुग्दैन, तपाईंसँग स्किलहरू पनि हुनु जरूरी छ। ससाना कुरामा ध्यान दिएर तपाईं आफूभित्र स्किल विकसित गराउन सक्नुहुन्छ र प्रमोसन पाउनुहुन्छ।
अफिसमा आफ्नो काम गर्ने अनि साथीहरूको कामलाई पनि सहायता गर्ने मानिसलाई सबैले मन पराउँछन् । कुनै अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने पनि यस्ता मानिसले सजिलै समस्या समाधान गरिदिन्छन् । प्रमोसनका बेलामा उनीहरूलाई विचार गरिनु स्वभाविक हो ।
तपाईं काममा त सिपालु हुनुहुन्छ तर तपाईंको व्यवहार राम्रो छैन भने प्रमोसनमा अवरोध आउँछ । सहकर्मी तथा आफूभन्दा वरिष्ठसँग तपाईंको जस्तो व्यवहार हुन्छ, त्यसैले तपाईंको प्रमोसन हुने नहुने कुरा निर्धारण गर्छ ।
प्रमोसन पाउन मन छ भने हाकिमलाई पनि थाहा दिनुपर्छ । हाकिमसँग आफ्नो कामको दक्षता बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । अनि हाकिमले औंल्याएका कमजोरीलाई दोहो–याउनु हुँदैन । गल्तीहरू दोहो–याउनुभएन भने हाकिमले आफ्नो कुराको महत्त्व तपाईंले दिएको अनुभव गर्छन् र प्रमोसनमा विचार गर्छन् ।
सक्षम साबित गर्नुस्
कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रमोसनमा कुनै अवरोध हुँदैन । आफ्नो कला, क्षमता र कुशलताले तपाईं कम्पनीलाई अघि बढाउने कर्मचारी हो भनी साबित गर्नुस् । कम्पनीले ठूलो जिम्मेवारी दिएर तपाईंबाट फाइदा लिन्छ ।
प्रमोसन दिनुअघि तपाईंको हाकिमले अबको पाँच वर्षमा तपाईं आफूलाई कहाँ देख्नुहुुन्छ भनी सोध्छन् । त्यसका लागि तपाईंले योजना पहिले नै बनाएर उनलाई सुनाउनुपर्छ । तपाईंको प्लानले कम्पनीलाई फाइदा पनि हुनुप–यो ।
तपाईंलाई आफ्नो काम मन परेको छैन भने हाकिमलाई नसुनाउनुस् । कुरा गरेपिच्छे तपाईंले कामको खोट निकालिरहनुभयो भने हाकिममा नकारात्मक प्रभाव पर्छ अनि तपाईंले प्रमोसनको कुरा उक्काउन समेत सक्नुहुन्न ।
November 3, 2017 January 1, 2019
पेट दुखेर अस्पताल पुर्याइएकी १० वर्षीया बालिकाको जाँच गर्दा खुल्यो यस्तो रहस्य !
कुन मौसममा के खानेकुरा खाने ?
December 17, 2017 January 1, 2019
तामाको औंठी लगाउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा !
व्यायामका ७ आश्चर्यजनक फाइदा